I-Pressure wave therapy iyindlela efakazelwe ephumelelayo yokuphazamiseka okuhlukahlukene nobuhlungu obungamahlalakhona. Amagagasi okucindezela abangela i-microtrauma endaweni ephathisiwe, evuselela i-neo-vascularization (ukuhamba kwegazi elisha) esifundeni. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ikhasi Facebook ingxenye yethu noma yezwana esekupheleni kwendatshana uma unemibono, imibono noma imibuzo maqondana nale ndlela yokwelashwa.
Ukujikeleza kwegazi okusha okukhuthaza ukwelashwa ezicutshini. Ukwelashwa kwegagasi lengcindezi ngaleyo ndlela kuvuselela amandla omzimba okwelapha ukuphazamiseka kwemisipha kanye nemisipha ngokwephula izicubu ezilimele bese kufakwa izicubu ezinempilo nezintsha zemisipha noma zemisipha.
I-Pressure wave therapy yasungulwa eSwitzerland futhi yabonakala iyindlela ephumelelayo yeziguli ezinezimo ezingalapheki, ezigwema ukusetshenziswa kokuhlinzwa, imijovo ye-cortisone noma ukusetshenziswa kwemithi. Ukwelashwa ngakho-ke ngaphandle kwemiphumela emibi, ngaphandle kokuthi inqubo yokwelapha uqobo ingaba buhlungu futhi ibuhlungu.
Kwenziwa kanjani ukwelashwa kwe-wave wave?
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, udokotela uzoxilonga lesi sifo, akhombe lapho ubuhlungu bukhona abese ekurekhoda lokhu. Bese kusetshenziselwa izivumelwano zokwelashwa ezinkingeni ngazinye (ngokwesibonelo, bese ziyelashwa i-plantar fascia ngokushaywa okungu-2000 ngesiphenyi esingu-15mm).
Sicabanga ukuthi kuyisibonelo kakhulu ukukukhombisa ividiyo ngokuphelele usebenzisa i-pressure wave therapy ngokumelene nokuxilongwa kwe-plantar fascitis. Lokhu kuxilongwa kuvame ukuhlanganiswa yizici eziningana, kepha iqiniso ngukuthi ipuleti le-tendon elingaphansi kwekhola lonyawo naphambi kwethambo lesithende ligcwele ngokweqile nokuthi kulimala ukungasebenzi kahle. Lezi izicubu zomonakalo zinobunzima obukhulu bezimpawu (zikhipha amasiginali wezinhlungu ngaphezulu), azisebenzi kangako maqondana nokuxoshwa kokuthuthumela kanye nokudluliselwa kwesisindo, nokuthi izicubu ezelimele zinciphisile ukujikeleza kwegazi namandla okuphulukisa. Ukwelashwa kwe-Pressure wave ngakho-ke kubhidliza le izicubu zomonakalo (obekungafanele kube lapho) bese kuqala inqubo yokulungisa lapho kancane kancane, ngaphezu kokulashwa okuningana, ikususe ngomsipha omusha noma ophilile noma izicubu ze-tendon.
Ividiyo - Ukwelashwa kwe-Pressure wave ngokumelene noPlantar fasciitis (chofoza esithombeni ukubona ividiyo)
umthombo: Isiteshi se-YouTube.net. Khumbula ukubhalisa (mahhala) ukuthola amavidiyo afundisayo futhi amahle. Samukela neziphakamiso zokuthi ividiyo yethu elandelayo izokhuluma ngani.
Funda futhi: - Ungayiqeda Kanjani I-Plantar Fascitis
Singayincoma kakhulu le ndatshana engenhla - ebhalwe udokotela wezokwelapha emtholampilo ohlukanisa imikhakha ehlukene Isikhungo Se-Råholt Chiropractor (Umasipala wase-Eidsvoll, Akershus).
Ukwelashwa kwenziwa ukwelashwa okungaphezu kuka-4-12, kuya ngobude nobukhulu benkinga, cishe ngeviki elilodwa phakathi. Ngokwelashwa kwamuva, kungajwayelekile ukuthi ube nesikhathi eside phakathi kwezindlela zokwelashwa ngenxa yezinqubo zokululama. Ukwelashwa kungaqukatha ukushaqeka ngokomzimba / amagagasi wengcindezi amaningi - okungukuthi hhayi amaza amanje noma omsindo.
Kubalulekile ukuthi ukwelashwa kwe-pressure wave akenziwa kaningi kunesonto kanye nokuthi kuvunyelwe ukuhamba cishe isonto eli-1 phakathi kokwelashwa ngakunye - lokhu ukuvumela impendulo yokuphilisa ukuthi kuthathe isikhathi sokusebenza nezicubu ezingasebenzi.
Njengezinye izindlela zokwelashwa, ububele bokwelashwa bungenzeka, futhi lokhu kuvame ngenxa yokuthi kubangela ushintsho lwezicubu.
- Kwezinye izimo kungathatha amasonto afika ku-6-8 ngaphambi kokuthi uqaphele ukuphulukiswa okuphelele ngemuva kokwelashwa kwegagasi lengcindezi, kepha abaningi babona umthelela omuhle, wokuqeda izinhlungu osuvele ukwelashwa okungu-2-3. Umuntu kufanele futhi abhekane nayo kanye imbangela yokulimala ukugwema ukubuyela emuva noma ukwenyuka.
Ukucindezela kwegagasi yokulwa nezifo ezingamahlalakhona
Isifo esingalapheki ukulimala lapho izindlela zokuphulukisa zemvelo zomzimba ziyeke ukuzelapha. Ngamanye amagama, umuntu angasho ukuthi umzimba "usudelile".
Amagagasi okucindezela amaza aphezulu angena phansi angene ezicutshini ezilimele futhi abangele i-microtrauma - umzimba uphendula kulokhu ngokwandisa ukujikeleza kwegazi nokugayeka kokudla emzimbeni okuchazayo njengendawo yokulimala. Lokhu-ke kuvuselela namandla omzimba okuzilungisa. Kuvamile ukuzwa ukuphumula kobuhlungu ngokushesha futhi ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ukunyakaza ngemuva kokulashwa okungu-1-3.
Yini Ongayisebenzisa Ngokucindezela Kokwelashwa Kwegagasi?
Ingcindezi yokwelapha i-Pressure wave ingaphatha, phakathi kwezinye izinto:
- Achilles Izinkinga umsipha
- Ukulimala kwengcindezi ngaphansi konyawo / i-plantar fascite (ukulimala kwethenda ku-plantar fascia) & isithende iqhubezela (umcako onqenqemeni oluphambili lwethambo lesithende sokunamathiselwe kwe-tendon)
- I-Frozen hip (i-adhesive capulite okhalweni)
- Ihlombe iqhwa (isinamathe
- I-golf elbow (medial epicondylitis)
- Eqa amadolo - ubuhlungu ngaphansi kwe-patella
- lime ehlombe (calcification in tendon eyodwa noma ngaphezulu ehlombe)
- igundane ingalo
- Abagijimi baguqe (ukugijima idolo) - ubuhlungu ngaphezu kwe-patella kokunamathiselwe kwe-quadriceps
- Ukulimala kwetendon kanye ne-tendonitis
- Ubuhlungu behlombe nge-tendinosis (ukulimala kwethenda) kanye ne-tendinitis (tendonitis)
- I-Tennis elbow / epicondylite yamuva
- Ubuhlungu okhalweni
Ukwelashwa kwe-Pressure wave kuye kwaveza imiphumela yokulimala kwe-tendon nezinkinga zomzimba wonke (ngokwesibonelo, i-plantar fascitis ngaphansi kweqabunga lonyawo). Indlela yokwelashwa nayo inobufakazi obuhle uma kuziwa ekwelashweni nasekuqothulweni kwe-tendon calcification (ngokwesibonelo, ihlombe lesikhumba kanye ne-spore yonke).
Ukutadisha (ucwaningo): Ukwelashwa kwe-Pressure wave kuyasebenza ekwelapheni iqhwa / iqhwa elibandayo / i-capsulite enamathela
Shaya ngehlombe eqandisiwe? Ngemuva kwalokho ucwaningo lukhombisa ukuthi kufanele uzame i-pressure wave therapy ukuze unciphise inqubo yokwelapha yalokhu kuhlukunyezwa okungapheli okungahlala iminyaka eyi-1-2 ngaphandle kokwelashwa. Ucwaningo olushicilelwe kumaphephabhuku owaziwayo i-International Journal of Preventative Medicine luveze ukuthi ukwelashwa okungama-4 ngaphezulu kwamaviki ama-4 kuholele ekuphuculeni umtholampilo ekuhambeni kwehlombe nokuthi umuntu ubuyele emisebenzini yakhe yansuku zonke ngokushesha. Sincoma ukuthi yenziwe ngokuhambisana ukuzivocavoca ehlombe iqhwa futhi ngaphansi kokuthola usizo lodokotela ogunyazwe ngokusemthethweni (i-physiotherapist, udokotela, i-chiropractor noma i-Manuel Therapist).
Isifundo (ucwaningo): Ukwelashwa kwegagasi lengcindezi kubhalwe emtholampilo ekwelapheni i-fasciitis engapheli yesitshalo
Njengocwaningo olukhulu / ukuhlaziywa kwe-meta (uhlobo olunamandla kakhulu locwaningo), ngaphetha ngokuqinile:
"Ingcindezi ye-Pressure wave iyindlela ephumelelayo nephephile yokwelashwa kwe-plantar fasciitis." (I-Aqil et al, 2013)
Kepha njengoba babhala - ezimweni ezinzima kungathatha amasonto afika kwayi-12 (kanye nezindlela zokwelashwa eziyi-12) ngaphambi kokuthi ubone umehluko omkhulu. Ngenxa yokushoda kwemininingwane emitholampilo, ngakho-ke kunabaningi abanokulimala okungamahlalakhona nokubi kakhulu kwezicubu zemisipha ngaphansi konyawo abadela ngemuva kokwelashwa okungu-4 - 5 kuphela. Lapho iqiniso ukuthi kungenzeka ukuthi, ngenxa yokuthi ukuxilongwa kwabo kwakukubi kakhulu kunokujwayelekile, babedinga ukwelashwa okuningi kakhulu esikhathini eside.
Lapho umuntu azi ukuthi ukwelashwa kwamagagasi okucindezela kusebenza kanjani, nakho okugcizelelwe ocwaningweni locwaningo, umuntu uyabona ukuthi akunakwenzeka ngokomzimba ukuthi amagagasi engcindezi angabi namthelela ezicutshini zemisipha ezilimele. Zidiliza izicubu zethenda, ezifakazelwe, ezilimele nezingasebenzi futhi zibangela impendulo ebonakalayo yokuphulukisa endaweni. Inkinga kuphela ukuthi inqubo kufanele iphindwe kaningi ekwelashweni okuningana - bese ezimweni eziningi ngaphezu kwezindlela ezi-5-8 zokwelashwa ezijwayelekile abaningi bazama ngaphambi kokuba bayeke.
U-Aqil et al. Ukwelashwa kwe-Extracorporeal Shock Wave Kuyasebenza Ekwelapheni i-Chronic Plantar Fasciitis: Ukuhlaziywa kwe-Meta kwama-RCTs. Umtholampilo Relat Res. 2013 uNov; 471 (11): 3645-3652. Ishicilelwe ku-inthanethi 2013 Jun 28.
I-Vahdatpour et al, 2014. Ukusebenza kwe-extracorporeal Shockwave Therapy kuFrozen Beer. Int J Prev Med. I-2014 Jul; I-5 (7): 875-881.
Zizwe ukhululekile ukusebenzisa ibhokisi lokuphawula elingezansi noma usithumele umyalezo oyimfihlo nge media social) uma unemibuzo.
Ingabe Ukucindezelwa Wave Liyingozi?
Cha, akunjalo - kepha njengakwezinye izindlela zokwelapha ezilondolozayo, i-pressure wave therapy ingadala ubumnene bendawo nobuhlungu besikhashana ngenxa yokuthi iphula izicubu ezilimele emzimbeni futhi iqale inqubo yokulungisa endaweni. Ubumnene obunjalo bujwayelekile ngokuphelele ukuzwa kuze kube ngamahora angama-24-72 ngemuva kokuphathwa ngokomzimba.
Wake waba ne-tendonitis ehlombe. Ingabe lokhu kungelashwa nge-pressure wave treatment?
Njengoba kushiwo esihlokweni esandulele, kukhona ukuxilongwa ngokweqile maqondana neqiniso lokuthi ukulimala kwethenda kuvame, ngokungalungile, kubizwa nge-tendonitis. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi kuyinto engavamile kakhulu ukuhlukunyezwa kwe-tendon kune-tendonitis. Kepha impendulo ukuthi, yebo, ingcindezi yokwelashwa kwengcindezi nayo ingasetshenziswa ngokumelene nokuxilongwa okuphela ekugcineni -ittâ (ngokwesibonelo, i-supraspinatus tendinitis, i-tendonitis yehlombe, noma i-plantar fasciitis).
Ngubani owenza ukwelashwa kwe-pressure wave?
Ukwelashwa kufanele kwenziwe ngamaqembu ochwepheshe agunyazwe esidlangalaleni (i-physiotherapist, i-chiropractor noma i-manual Therapist) ngobuchwepheshe obukhethekile ekuhlolweni nasekwelapheni izifo emisipheni, emalungeni, emisipheni nasemithanjeni. Ukugunyazwa kwezempilo yomphakathi kufaka isihloko esivikelekile futhi kuwuphawu lwekhwalithi oluvela kuziphathimandla zezempilo zaseNorway futhi kuqinisekisa amalungelo nokuphepha kwakho njengesiguli - yingakho sincoma ngokuyinhloko ukuhlolwa nokwelashwa kwamaqembu ezisebenzi ngesihloko esivikelwe (ngamanye amagama, akukho emthethweni ukubiza i-physiotherapist noma i-chiropractor uma eyodwa ayihlukile - ngokungafani namanye amaqembu ezomsebenzi angavikelwe nokuthi noma ngubani angazibiza ngawo). Sinikeza amakhulu ezincomo kumasayithi okwelashwa ngomyalezo wangasese ezinkundleni zokuxhumana phakathi nonyaka - ngakho-ke ukhululekile ukuxhumana nathi uma ufuna owelapha wasendaweni, onekhono futhi ogunyaziwe.
Sawubona! Ngingathanda ukuthola umelaphi onekhono e-Copenhagen noma. indawo ezungezile esebenzisa amagagasi okucindezela kwezifo zemisipha nemisipha. Ungakwazi ukuncoma noma ubani? Vh Torill
Ngakho-ke, sesithole izincomo ku-"The Clinic on Toftegårds Allé"
Ikheli: Toftegårds Alle 7, 1. th
Ngikufisela inhlanhla! 🙂
Ola Nordmann uthi:
Uma lokhu kufana ne-shock wave, kuningi okwenzekayo kunalokho abaningi abakuqaphelayo.
Ngithole ukushaqeka kwegagasi kuzwane omkhulu ngenxa yemisipha nemisipha edonsa uzwane endaweni engafanele ngenxa yokopha kobuchopho nokukhubazeka okuyingxenye.
Ekugcineni ngaqala ukubuyisela umuzwa emhlane wami, ukuze ngikwazi ukuzwa umsipha owodwa ngesikhathi.
Ngakho-ke sanweba igagasi lokushaqeka laba ngaphansi kwalo lonke unyawo, futhi izinto eziningi zenzeka ngasohlangothini lwesokudla lonke. Kuze kufike endlebeni yami futhi ngibe muhle kakhulu. Kodwa empeleni kungathatha iviki elingu-1 ngaphambi kokuthi ngibone ushintsho.
Amasonto amaningi kakhulu. Futhi uthole i-massage yehora elingu-1 eyaqala ngempela umzimba, ukuze ukuziqeqesha kuhambe ngokushesha futhi kukhuthaze kakhulu.
Ngisho nangemva kweminyaka emi-5-6, ngamaviki ambalwa okuqiniswa, imiphumela emangalisayo iza. Kodwa akukho ukwesekwa, khokha yonke into ngokwakho, ngoba azikho izifundo kulokhu maqondana neziguli ze-stroke okungenani.
Kepha ngiba ngcono kakhulu lapho 🙂
I-Mona Estilrønningen uthi:
Sawubona! Kutholakale ukuthi une-plantar fasciitis cishe. Iminyaka emi-3 onyaweni lwesokunxele kanye nonyaka ongu-1/2 kwesokudla. Ingabe igagasi lokucindezela liye latuswa udokotela futhi selifakwe isicelo kulo, kodwa ubani okwenzayo endaweni yami eseduze?
Bese sidinga indawo yangakini ukuze sikwazi ukukunikeza izincomo kuyo.
UHeidi Winther Nylund uthi:
Kukuphi ezweni kungenziwa lokhu? Ngihlala e-Bodø?
Nicolay v / Vondt.net uthi:
Lokhu kungenziwa ngodokotela abaningi be-chiropractor kanye nabelaphi bezandla - bakhona nama-physiotherapists amaningana abasebenzisa lolu hlobo lokwelapha. Sincoma ukuthi uxhumane nomtholampilo oseduze futhi ubuze ukuthi bayakunikeza yini le ndlela yokwelashwa. Ngikufisela inhlanhla.
Laila espeseth uthi:
Udokotela wami uthi ngine-mucositis edolweni lami. Kuyini futhi indlela yokwelapha?
UNicolay v / vondt.net uthi:
I-Infrapatellar bursitis ukuxilongwa okungenzeka. Iphi i-mucositis? Kuphi ukuvuvukala?
Ingabe uyazibuza ukuthi i-pressure wave therapy iyanconywa yini esihlalweni? Iqinile, futhi ithambo-liqinile esihlalweni, ngakho-ke akunakwenzeka ukuqondisa emuva. Ingabe igwegwile ngokuphelele, ngakho kuye kwaba buhlungu ezindaweni eziningi. Siyabonga kusengaphambili ngempendulo yakho.
Yebo, isetshenziselwa ngokumelene ne-tendinosis kanye ne-tendinopathies e-hip, phakathi kwezinye izinto. - kodwa futhi ingasetshenziselwa i-piriformis syndrome esihlalweni. Kubalulekile ukwazi ukuthi i-piriformis engasebenzi izokwenzeka njalo ngokuhambisana nokungasebenzi kahle kwe-pelvic- Ngakho-ke, hamba kumtholampilo ogunyazwe nguhulumeni (i-chiropractor noma uchwepheshe) ukuze ukwazi ukubhekana kokubili imisipha namalunga enkingeni yakho.
Marit Khelifi uthi:
Lokhu kwelashwa kuhlobene kanjani nathi nge-fibromyalgia?
Sawubona, lokhu kwelashwa kuhlobene kanjani nokuguga kanye ne-osteoarthritis eqakaleni?
Elin Sollie uthi:
Lokhu kusebenza kanjani, isibonelo, entanyeni, ehlombe ngemva kokungqubuzana? Lapho entanyeni (i-whiplash ne-whiplash) ithole ingcindezi ngokushaya ikhanda. Uke waba nokwelashwa okunjalo ku-Plantar fasciitis esikhathini esedlule futhi kwasiza.
UNicolay eVondt.net uthi:
Ukwelashwa kwe-pressure wave kungasetshenziswa ngokumelene nokungasebenzi kahle kwemisipha kanye ne-myalgias emahlombe nemisipha ehambisana nentamo (isibonelo, i-trapezius muscle engenhla kanye ne-levator scapulae).
Kubaluleke kakhulu futhi ukuthi ugxile kakhulu ekuqeqesheni ukuzinza kwentamo namahlombe ukuze unikeze ukusekela ezindaweni ezilimele.
Ukwelashwa kwamagagasi okucindezela kufanele kwenziwe kuphela uchwepheshe wezempilo ogunyazwe esidlangalaleni - njengodokotela wokuvivinya umzimba noma i-chiropractor.
Sawubona! Ngithola ukwelashwa kwamagagasi okucindezela kwe-plantar fasciitis onyaweni, ngemva kokwelashwa ngithola ubuhlungu obuncane ekhanda futhi ngizwe i-ugg. Cishe umuzwa ofanayo nangemva kwendiza ende noma ukugula kwemoto. Ingabe lokhu kujwayelekile?
UNicolay v / Akatholakali uthi:
Kungokwemvelo uma kukhona i-plantar fasciitis ebalulekile - lokhu kungenxa yokusabela komonakalo okulawulwayo onyaweni kanye nokuwohloka kwezicubu zomonakalo.
Ukuze ugweme lo muzwa, uyalulekwa ukuthi uphuze amanzi engeziwe ngosuku olufanayo nokwelashwa - nangakusasa.
Inhlanhla nokululama okuhle!